Waa maxay sababta aad u daawato Samurai Champloo - Muuqaalka Cradle
Samurai Champloo Dib u eegis
2 Comments Sababta aad u daawato Samurai Champloo
Ma jirin wax badan Naadi korkayga Naadi daawashada safarka oo runtii ka soo baxay sida Samurai Champloo leeyahay. Tixdan aad ayey iiga yaabisay maadaama aanan wax badan ka sugin ciwaanka daacadnimo. Waxa aad u cadaan doona marka aad bilawdo qaybta kowaad waa in Samurai Champloo aanu gabi ahaanba ahayn waxa aad u malaynayso inay noqon doonto. Anime oo kaliya soo baxay 2004, waxaan dhihi lahaa way ka duwan tahay ka hor waqtigiisa iyo tayada qorista, jilayaasha, sheekada, goobaha iyo qaybaha kale ee bandhiggu waxay si cad u xoojinayaan fikradayda.
Fuu wuxuu akhriyaa "Qorshaha" - Samurai Champloo
Sheekadu waa mid aad u xiiso badan waxayna maareysaa inay sii socoto ilaa xitaa qaybaha dambe. Jilaayada jilayaasha ayaa wanaagsan, waxaan haynaa 3 jilaa oo aan gadaal u imaan doono iyo tiro badan oo jilayaal hoosaadyo taageeraya kuwaas oo dhamaantood ahaa kuwo aad loo xasuusan karo intii aan daawado tan. Naadi taxane.
Sheeko Muhiim ah
Samurai Champloo waxaa loo dejiyay waqti kale oo taariikhda Jabbaan ah oo aad uga muhimsan Xiligii Edo (1603-1868) oo daba socda sheekada 3 qof, oo laba ka mid ahi yihiin Makoto midda kalena gabar yar. Gabadhan yar oo loo yaqaan Fuu ayaa ka shaqeysa goob shaaha laga cabo oo ku taal magaalada, markii ay la kulantay wiil uu dhalay xaakimka xaafadda oo bilaabay inuu u hanjabo iyada iyo qoyska maqaaxida shaaha ku shaqeysata (madaxdeeda).
Mugen & Jin waxay sugayaan geeridooda - Samurai Champloo
Nasiib wanaag iyada ayaa badbaadisay Mugen & Jin, laba Makoto kuwaas oo si gooni gooni ah u soo gala dukaanka oo aan xidhiidh la lahayn. Intaasi ka dib waxay dhamaantood ka baxsadeen dukaanka oo gubtay ka dib markii mid ka mid ah raggii ( gacanta laga gooyay) aanu hore u aragnay inuu dab qabadsiiyay. Iyagoo og inaysan haysan meel ay aadaan iyo lacag la'aan 3-du waxay ku biiraan raadinta qof dahsoon oo loo yaqaan "Samura gabbaldayahai” yaa run ah meel uu ku sugan yahay lama garanayo.
Sida la sheegay markii hore sheekadu waxay u muuqataa mid caajis ah oo aan caadi ahayn, laakiin waa tacaburrada iyo xaaladaha ay jilayaasha galaan taas oo aad u xiiso badan in la daawado, gelitaanka culeys dhan oo dhib ah oo inta badan aan ujeedo ahayn. Waxa jira qaybo badan oo kala duwan oo ay saddexdayadu isku galaan xaalado qalafsan. Ma kharribi doono laakiin mid ka mid ah 3da qof ee ugu muhiimsan ayaa la afduubay oo la afduubay in ka badan 5 jeer!
Jilayaashayada ugu muhiimsan ee Samurai Champloo waxay ahaayeen kuwo aad loo xasuusto oo aan ka helay dhammaantood. Jilayaasha codka ayaa shaqo fiican ka qabtay jilayaasha oo dhan, waana ku faraxsanahay tan. Aad bay ugu habboon yihiin doorka, mana filayo inay maanta si ka wanaagsan u qaban kareen.
Marka hore waxaan leenahay gabadha, oo loo yaqaan Fuu. Fuu waa da'yar, qiyaastii 15-16 gudaha Naadi oo leh timo buni ah oo dhererkoodu dhexdhexaad yahay ayay inta badan xidhataa. Waxay kaloo xidhataa Kimono-dhaqameedka Jaban ee casaanka ah sida saaxiibadeed oo kale Jin iyo Mugen.
Fuu nooc ka mid ah wuxuu u shaqeeyaa sidii baqdin u dhexeeya Mugen & Jin, oo ka joojinaya inay isku dilaan marar badan Anime. Waxay u naxariis badan tahay oo naxariistaa, labadaba Jin & Mugen iyo jilayaasha kale ee Anime ah.
Xiga waa Mugen, kuwaas oo aan ku kulanno qaybta koowaad ee Naadi, isbarasho gacan ka hadal ah markii uu ka soo baxay goob shaaha laga cabo Fuu iyo Jin. Mugen waa seef-qaade wax ku ool ah oo laga baqo, wuxuuna hal mar la qaadi karaa cadowgiisa Katana.
Waxa loo arkaa sharci-daro ku jira Naadi oo muuqashadiisa duurjoogta ah ayaa tan maskaxdeena ku xoojinaysa. Waxa uu leeyahay timo qallafsan oo laba indhood oo baqdin leh leh. Waxa uu leeyahay dabeecad qallafsan mana aha dabeecadda aan jeclahay laakiin waxaan jeclahay sida loo qoro, maadaama uu ka duwan yahay Jin wax badan sida ay mar walba ku murmaan.
Xarfaha-hoose ee Samurai Champloo way fiicnaayeen oo aad ayaan uga helay dhammaantood. Dhammaantood waxay ahaayeen kuwo aad loo xasuusan karo, waxayna ka dhigeen qaybaha mid aad u xiiso badan in la daawado. Qaabka Nordic-Viking wuxuu ahaa mid aad u qosol badan waxaanan jeclaa sheekada halka dumarka soo jiidashada leh ee soo jiidanaya Jin iyo Mugen markaas waxay noqotaa mid qalloocan.
Jilayaasha hoose ee la xasuusan karo - Samurai Champloo
Mid ka mid ah shay in la sheego ayaa ah in dhammaantood ay dareemeen wax dhab ah oo gaar ah. Animations sidoo kale aad bay u tafatireen intooda badan si ay u fududaato in la qabsado iyaga. Jilayaasha codka waxay qabteen shaqo aad u wanaagsan iyagoo isku keenay dhamaantood taasi waa hubaal.
Sababaha loo daawado Samurai Champloo
Mugen & Jin ayaa lagu xukumay in la dilo – Samurai Champloo
Sharaxaya Hal-abuurka Samurai Champloo
Hadda ka hor inta aanad ogaan naftaada cad waxaan si kooban u odhan doonaa habka sheekada Samurai Champloo waxaa naloo soo bandhigay waa hal-abuur aad u yar in la yiraahdo. Tusaale ahaan tani waxay noqon kartaa habka hal-abuurayaashu ay uga guuraan goobta una guuraan goobta iyo aaladaha ay adeegsadaan si ay tan u sameeyaan. Mararka qaarkood waxay adeegsadaan kala-guurka indho-qabadyada sida jeex-jeexyada morph-ka iyo waji-xidhka, laakiin mararka qaarkood waxay si fudud u libdhaan madow ama isticmaalaan maro-madow.
Animation cajiib ah waqtigeeda
Habka Animation-ka iyo alaabta la dhammeeyey ee Samurai Champloo waa mid ka mid ah guusha kaliya. Taxane soo baxay ilaa 2005tii, waxaan odhan lahaa aad bay uga soo horraysaa waagii hore ee hore. Hubaal waxaa jiray Anime kale wakhtigaas oo leh walxo la mid ah kan Samurai Champloo but I think for an Anime I haven’t seen much talk about, it would surprise me if people didn’t mention this aspect of it as it would only be doing the series a disservice.
Mugen & Jin waxay xirfadahooda ku muujinayaan Fuu – Samurai Champloo
Ku-simaha Codka quruxda badan
Jilayaasha codka ayaa runtii keenaya jilayaasha Samurai Champloo nolosha iyo qaabka ay u qoran yihiin ayaa u oggolaanaya jilayaasha codka inay si dhab ah uga faa'iideystaan ​​​​wada hadalka taxanaha ah. Mugen iyo Fuu leeyihiin codad aad loo buunbuuniyay halka Jin uu jilicsan yahay oo la xafiday. Codadkani waxay si sax ah ugu habboon yihiin jilayaasha aragtidayda.
Mugen & Jin waa la is tufay - Samurai Champloo
Weligaa kama caajisi doontid kabkan si kastaba way samayn doonaan Naadi aad u xiiso badan oo si fudud loo daawado, iyadoo la tixgelinayo halkaas 3-da jilaa ee ugu muhiimsan. Waxa kale oo jira hal mar iyo jilayaal dib u soo muuqday kuwaas oo leh cod weyn sida hogaamiyaha Bilayska sirta ah ee caawiya samatabbixinta Fuu qaybihii hore.
U qulqula sida webi
Xawliga Samurai Champloo aad ayaa loo hagaajiyay waxaana jeclahay habka ay u socoto. Waxay la mid tahay kan webiga, markaa magaca. Si kastaba ha ahaatee, habka Naadi waa habaysan oo bilawga dhamaadka dhacdo kasta waxay la macno tahay inay si aad u wanaagsan isu dhex marto. Waxa jirta qayb u dhaw taxanihii badhtankiisa oo aynu dib ugu noqonayno dhamaan dhacdooyinkii qaybihii hore ee ay 3-daasi is dhex galeen. Qaybtan waxa loo soo bandhigay hab soo jiidasho leh oo hal abuur leh, halkaas oo aan ku aragno dhammaan dhacdooyinkii hore iyada oo loo marayo xusuus-qorka Fuu.
Fuu wuxuu ku kalsoon yahay Okuru – Samurai Champloo
Mugen & Jin inta ay maydhanayso xado oo wax akhri. Hadda waxa agaasimayaasha intooda badani ay tani u qaban lahaayeen waxay noqon lahayd inay soo bandhigaan montage fudud oo ku saabsan dhammaan dhacdooyinkii qaybtii hore oo ah nooc dib u koobis ah, taas oo asal ahaan ah waxa ay tahay.
Si kastaba ha ahaatee, waxa aan u arko wax weyn oo ku saabsan qaybahan waa habka loo soo bandhigay. Doorashada in dhacdooyinka la akhriyo (si fiican Mugen ma akhriyi karo) Mugen iyo Jin runtiina waxay ina siinaysaa aragti ku saabsan sida ay uga falceliyaan falalkooda marka dib loogu akhriyo iyaga oo ka yimid POV of Fuu. Waxay ku siinaysaa cod wax ku ool ah oo ku saabsan dhammaan dhacdooyinkii hore, sidaas darteed waxaan aragnaa dhammaan dhacdooyinkan in kasta oo ay aragtideeda leedahay. Tani waa wax aan jeclahay.
Geedka xurmada leh ayaa dab la qabadsiiyay - Samurai Champloo
Waa hab aad u hal abuur leh oo aad u wanaagsan in lagu arko dhammaan dhacdooyinkan oo aan jeclaa in ay ka soo jeedaan hal qof oo keliya maadaama ay tahay mid aad u soo jiidasho leh. Soosaarayaal badan oo kale ma dhibeen tan laakiin waxaan u maleynayaa inay tahay hab wanaagsan oo looga gudbi karo dhammaan dhacdooyinkan muhiimka ah iyadoo wali ay ka dhigayso madadaalo daawashada iyo ka qaybgalka.
Codku wuu la socdaa Samurai Champloo si gaar ah ayaa loo ogaan karaa mar haddii aysan jirin waxaad filan kartaa taxanahan ficil-kacasiga Anime. Waxaa jira heeso badan oo Hip-Hop ah oo lagu garaaco halkaas laakiin sidoo kale qaar ka mid ah kuwa shucuurta ah sidoo kale raadadkani waxay ku dhow yihiin inay u muuqdaan inaan aqaano taxanaha sida qaabka Hip-Hop ee garaaca heesaha dhawaaqa dhamaantood aad ayaan u yaqaan. Uma muuqdaan kuwo aad halis u ah laakiin hubaal ma dareemaan inay meesha ka maqan yihiin.
Daldalaada waa la soo hormariyay - Samurai Champloo
Wadahadalka in Samurai Champloo waa weyn yahay oo waxay kugu ilaalinaysaa suulashaada. Asal ahaan kimisteriga u dhexeeya 3da jilaa ee ugu muhiimsan waa sababta uu si fiican u shaqeeyo laakiin sidoo kale waa habka loo qoro. Sheekada dhexmarta inta badan jilayaasha taxanaha ayaa u muuqda…. si fiican…. run, xaqiiqadani waxay la macno tahay inaad ku raaxaysan karto oo aad si ka sii muhiimsan u rumaysan karto inta badan wada hadalka aad maqashid.
Fuu waxa uu Mugen waydiistaa caawimo - Samurai Champloo
Xitaa ka dib markii laga soo qaatay manga sannadkii 2004tii, weli aad bay u fiican tahay oo si fiican ayey u qoran tahay, xitaa haddii la isku ururiyey oo laga soo qaatay manga. Waxa jira muuqaalo dagaal oo aad u wanagsan oo la xasuusan karo oo aad u qosol badan oo ka kooban tuducyo dheer oo wada hadal ah kuwaas oo sidoo kale siinaya aragti ku saabsan qoraalka ka dambeeya bandhigga.
Dejinta Quruxda badan
Habka Animation-ka maaha wax aad u cajiib badan laakiin waxaa jira waqtiyo qurux badan oo aan runtii ku aragno kartida faneed ee animators taxanaha. Waxa jira qaar aad u qurux badan oo sawir gacmeed oo muuqaal ah wakhtigaas oo aad indhaha u soo jiiday. Waxaad runtii arki kartaa shaqo badan ayaa gashay abuurista taxanaha iyo goobaha aan ku aragno jilayaasha.
Imaanshaha hudheelka - Samurai Champloo
Waxaan ula jeedaa hal shay in la eego sida cajiibka ah ee bandhigani u eg yahay iyo tixgelinta wakhtiga ay soo baxday (2004) waxay noqon doontaa dhibcaha dhamaadka. Inta badan Qaybaha gabayga asalka ah ee "Shiki no Uta" ee MINMI waxay ku ciyaartaa in ka badan farshaxan farshaxan. Heestu waa mid xasuus mudan oo runtii igu dheggan. Waxa aan weli madaxayga ka maqlayaa waa hees aad u macaan, heeso aad u qurux badan iyo heeso xusuus leh.
Runtii waa waddo yar oo kaamil ah oo lagu dhammeeyo tacaburrada Jin, Mugen iyo Foo oo runtii nooca kuu ogolaanaya inaad ogaato in taxanuhu aanu ahayn mid culus sida ay u muuqato oo runtii kuu ogolaanaya inaad majeerto qaar ka mid ah farshaxanka ay soo bandhigto inta lagu jiro dhamaadka. Waxaad ka eegi kartaa hoos:
Samurai Champloo - Dulucda Dhamaadka - Shiki No Uta
Sheeko Horumarineed oo Wayn
Sheekadu waa wax aan si dhab ah loo dhisin marxaladaha ugu horreeya ee Anime-ka oo ka tagaya wax badan oo u furan su'aasha taas oo ku fiican hal qaab maadaama ay ilaaliso daawadayaasha mar walba su'aalo weydiinaya oo doonaya wax badan. Waxaan bilaabaynaa inaan aragno tilmaamo badan oo ku saabsan sheekada taxanaha mar dambe. Dhammaan waa wax aad u fudud in la raaco mana aha runtii qaybahan ka mid ah Naadi kuwaas oo ah kuwa ugu khuseeya laakiin ka baxsanaya yar ee ay galaan kuwaas oo ah kuwa ugu xiisaha badan ee la daawado.
Falcelinta guud ee Samurai Champloo Golayaasha iyo doodaha internetka labadaba waa naxdin. Dadka intooda badan waxay u muuqdaan inay aad ula yaaban yihiin inaysan la kulmin Anime-gan si ka dhakhso badan sidii ay u sameeyeen. Loo arkay xilli ciyaareedkii ugu horreeyay ee Lagoon Madoow sanad ka dib ayaan hawada sii deyn doonaa, waxaan dhihi lahaa Samurai Champloo si fiican u qabtay waqtigeeda.
Qaar ka mid ah Anime-ka oo aan kula kulmay daawashada Anime-ka safarkan ayaa dareemaya, fikradayda, sida alaabada iyo fikradaha aan dhammayn. Ku dhex milmay mabda'a abuurka ay la qabsanayeen. Laakiin Samurai Champloo, gabi ahaanba ma heli doontid aragtidaas. Waxay u egtahay filim. Waa ka hor waqtigiisa, waxaana kaliya ku riyoon karnaa xilli labaad, Dhanka kale, Netflix waa Iftiin Cagaar xilli kale oo 7 Seeds ah. Waxaa laga yaabaa inay jirto xaqiiqo kale oo halkaas ka jirta halkaas oo 7 Seeds kaliya helay xilli Samurai Champloo helay 4. Sidee nin ku riyoon karaa.
Mugen & Jin waxay aqbaleen aayahooda - Samurai Champloo
Uma maleynayo Samurai Champloo waxay noqon doontaa qof kasta waana fahmay taas. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad bixiso Samurai Champloo xabbad waxaan kuu ballan qaadayaa inaadan ka shallayn doonin. Waxay leedahay sheeko aad u wanaagsan, jilayaal madadaalo leh oo aad u fudud in la jeclaado lagana damqado, cod laxan siinaya qalbiga bandhigga laakiin sidoo kale siiya dhaqdhaqaaq iyo waqtiyo badan oo madadaalo iyo shucuur leh oo taxane ah. Waxaad ka daawan kartaa Netflix halkan: https://www.netflix.com/browse?jbv=70213065
Waad ku mahadsan tahay akhriska, maalin wanaagsan oo ammaan joog!
Ku caawi goobta adiga oo soo iibsanaya badeecada:
Shaati Gangstariva Naag [Naqshadda Hore Kaliya]
JAWAABAHA Hannya Roob Roob
Pingback: 5 Qoraalada Anime ee ugu Jeceylka ah ee laga bilaabo 2021 Usbuuca 24 | Dunida Crow ee Anime
10th Sebtember 2021 markay tahay 1:16 pm
Gelitaan Hore Ha Ila Ciyaarayn Miss Nagatoro - Xilliga 2aad Taariikhda Horyaalka Premier League + Guudmarka & Fikradaha
Gelitaanka Xiga Jinni dilaa - Meesha laga iibsado meheradda ugu fiican